fanafohezan-teny : UoJ
Créé : 2008
Aza adino ny discuss University of Jazeera
Ny Oniversiten'i Jazeera prefered indrindra anjerimanontolo ao amin'ny Emirates ny Dubai, rehefa mametraka fanamafisana ny fanabeazana, matihanina sy ny fivoaran'ny tena manokana ny mpianatra tsirairay. Isika natokana ho tsara amin'ny fampianarana, fianarana, sy ny fikarohana, ary ny fampandrosoana mpitarika ao amin'ny fitsipika maro izay manao ny fahasamihafana manerantany.
Hatramin'ny ny nitsanganany, UoJ no nanao ny tenany ho fanomezana izao tontolo izao-pianarana ireo mpianatra manomana fampianarana izay pianarana, manokana ary matihanina ny asa mahomby eo amin'ny voafidy saha. UoJ sampam-pianarana mirotsaka amin'ny fampianarana sy ny fikarohana mba hanosika ny faritry ny fahalalana maha-olombelona. Fa ny mpianatra izay faly ny hanadihady ny olana lehibe indrindra ao amin'ny 21sttaonjato, UoJ manatitra mpianatra manam-paharoa sy ny malala-tanana traikefa fanampiana ara-bola fandaharana.
Ny fomba fanabeazana dia dingana mitodika; ny fanantitranterany ao bridging-kevitra sy ny fampiharana, toy ny fandaharam-pianarana ny asa-noroahina sy ny fahaiza-monina. Ny fifantohana dia eo amin'ny mpianatra, ary ny fahombiazana fa ny Alumni efa nahavita dia porofo izany saina
lalàna & Economics Faculty
Teknolojian'ny fampahalalana & Design Faculty
College ny Lalàna & toekarena
College ny General Fanabeazana
Ianao ve mila discuss University of Jazeera ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
American University ao amin'ny Emirates Dubai
Ny Britanika University in Dubai Dubai